Home » Local Guides » ထိုင်ဝမ်
Posted by Shar Thet Man on Sep 19, 2019 in Local Guides, Photography, Society & Lifestyle, Travel |0comments
ဟိုတစ်ပတ်က ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာ လည်လို့ပတ်လို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းပြောပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အက်မင်က ထိုင်ဝမ်မှာဈေးဝယ်လို့ကောင်းမယ့်နေရာများကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။
shilin ညဈေးဟာ တိုင်ပေမှာနာမည်အကြီးဆုံး ညဈေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်ငယ်လေးတွေ အများကြီးနဲ့ လမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင်တွေလည်းရှိတာမို့လို့ အရမ်းကိုစည်ကားလို့နေတာပေါ့။ အက်မင်တို့ ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်း၊ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တစ်နေရာထဲတောင်ရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးပါ။
သွားမယ်ဆိုရင် – No. 101, Jihe Rd, Shilin District, Taipei City, Taiwan 111
နီးစပ်ရာ ရထားဘူတာ – Jiantan MRT Station
ဆိုင်တွေဖွင့်ချိန် – ညနေ (၄)နာရီလောက်ဆို ဆိုင်တွေစဖွင့်ပေမယ့် စသွားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ကတော့ ည(၉)နာရီပါ။
ဘန်ကောက်က Platinum shopping mall ကိုကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ခု တိုင်ပေမှာရှိတဲ့ Wu Fen Pu ကလည်း ဘန်ကောက်က Platinum shopping mall လိုပါပဲ..လက်ကားဈေးတွေလည်းရပြီး ပစ္စည်းတွေလည်းအရမ်းကိုဈေးသက်သာပါတယ်။ အကယ်လို့များတိုင်ပေရောက်လို့ ဒီဈေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂါနေ့ကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအလုပ်များတဲ့ တနင်္လာနေ့တော့ ရှောင်ပြီးသွားစေချင်ပါတယ်။
သွားမယ်ဆိုရင် – Yongji Street, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110 နီးစပ်ရာ ရထားဘူတာ – Song Shan MRT Station
နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Ximending ကိုသွားစေချင်ပါတယ်။ Local Brand တွေအပြင် နိုင်ငံခြားက Uniqlo လို brand တွေရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းတွေလည်းအစုံအလင်ရှိပါတယ်။ ရှော့ပင်ထွက်ရတာမကြိုက်တဲ့ foodie လေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်း အဲ့နေရာမှာ ဘားဆိုင်တွေ၊ ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်တွေပါအစုံအလင်ရှိသေးပါတယ်။ အဲလိုစုံလင်တဲ့နေရာကို
သွားမယ်ဆိုရင် – Shi-men Ting, Taipei City, Taiwan 108 နီးစပ်ရာ ရထားဘူတာ – Xi Men MRT Station
ဒီနေရာလေးကတော့ စာဂျပိုး (သို့) စာဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ့်ကို နိဗ္ဗာန်ဘုံပါပဲ။ ၂၄နာရီဖွင့်တဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ကတော့ တိုင်ပေမှာ အကြီးဆုံးစာအုပ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး တိုင်ပေ 101 တာဝါနားမှာရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရသာရှိရှိရောင်းချတဲ့စားသောက်ဆိုင်များလည်းရှိသေးတာမို့ ၀င်ရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ mall လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သွားမယ်ဆိုရင် – No. 11, Songgao Rd, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110 နီးစပ်ရာ ရထားဘူတာ – Zhongxiao Dunhua MRT Station
ဒီတာဝါကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ တိုင်ပေကမှန်းဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ တိုင်ပေမှာနာမည်အကြီးဆုံးတာဝါဖြစ်ပြီး အရှည်ဆုံးတာဝါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို brand တွေပြည့်နေတဲ့ shopping mall လည်းရှိတာမို့ brand ကြိုက်တဲ့သူတွေသွားသင့်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာဝါကနေလည်း တိုင်ပေမြို့ တစ်မြို့ လုံးကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
သွားမယ်ဆိုရင် – No. 7, Section 5, Xinyi Rd, Taipei City, Taiwan 110 နီးစပ်ရာ ရထားဘူတာ – Taipei 101 MRT Station